Warshadaha 2-Ply House ee Duubista iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
Neefsashada iyo Neefsashada Sare waa astaamaha ugu muhiimsan ee loogu talagalay ShiningWrap.
Miisaanka Wejiga: 55 ~ 75 gsm
Qalabka: PP / PE
Qaab dhismeedka 2 Lakab: LDPP + HDPP ama LDPE + HDPE
Xaaladda Gabadh: Laanta biyaha ama loomka Wareegtada
Midab: Caddaan ama sidii macmiil u codsado.
Daabacaadda: Ilaa 4 midab daabacaad ah
Cabbirka: 3 'X 100' 3 'X 150' 9 'X 100' 9 'X 150' 9 'X 195' 10 'X 100' 10 'X 150' 10 'X 195'
: Is-adeecid ayaa la heli karaa
PP / PE silig ShiningWrap gidaarka ka ilaaliya cimilada xunxun, caariyaysi. Waa biyo-xireyn, tamar-saar, iyo sifiican. Dhismaha, hawada iyo qoyaanka soo daadashada marwalba lama baajin karo. Shiningunesst Housewarp waa mid waara, biyo-celin ah, carqalad u adkaysanaysa cimilada oo ka hortagaysa qoyaanka, wasakhda inay gudaha gasho una oggolaato uumiga biyuhu inay bannaanka galaan.
Laga bilaabo bilaabidda xasilinta, waxaan si taxaddar leh u ilaalinaynaa silsilad kasta oo silsilad ah annagoo marwalba ku dhejin doonna sawirka / isudheellitirka dhinaca kobcinta.
Waxaa kujira hoos ubax sareyso si loo sameeyo silig culeyska dusha sare ka hor intaysan kuleylku gaarin inta lagu gudajiro DIE-COATING. Dhanka kale nidaamka qaboojinta ee sida gaarka ah loogu talagalay ayaa hubinaya inuu dusha sare ka jilicsan yahay ka dib dahaarka. Kaliya maaha xasiloonida xasiloonida laakiin sidoo kale gaas ka wanaagsan.
Muuqaal wanaagsan ayaa hubiya in Neefsashada sare ay soo raacdo kadib daabacaadda.
1. Ku dheji warqadda ama fiilooyinka 'PP' iyo xirmada (Flat Pallets)
2. Soo bandhigid qaas ah oo qaabeysay (US ama EN Standard Flat Pallets Ama Baakadaha Crate).
·Raagaya: ShiningWrap waa lakabka labaad / Weynaan / Weji Laba Weji iyo xannibaadda u-adkeysiga cimilada. Maadaama aan si taxaddar leh u daryeesho yarn inta lagu gudajiray Kartida adag waxay bilaabataa laga soo bilaabo markaas. Waxaa sii dheer jilaaca saxda ah iyo tikniyoolajiyada dharka lagu xirto, dharka ayaa weli ah xoog fiican ilaa iyo inta ay gacantaada u socoto.
·Fudud: Shiningwrap wuxuu lahaa hanti khafiif ah oo sahlaysa qaadista iyo rakibida.
· Wax la arki karo / Micro-karakooban: Hawsha socodka ayaa hubin doonta in ShiningWrap u oggolaato uumiga dheeriga ah inuu ka baxsado gudaha si looga hortago-engeegida qoyaan-kordhinta.
·Caddaynta Cimilada: Tan iyo wajiga bilawga fidinta yarn, waxaan bilaabeynaa inaan daryeelno canug yar oo yar annealing iyo sawiro, waxaanna ku duubnaa looms horumarsan, ilaa T-Die Coating ilaa ay ka dhamaato, waxaas oo dhanna waxay xaqiijinayaan heerka kalasaarashada wanaagsan , tensile / jeexitaan wanaagsan iyo burburin wanaagsan. Ilaalinta qulqulka Exteriors-ka ayaa la hubin doonaa xitaa inta lagu jiro dabaylaha adag ama cimilada xun.
·Is-hoggaansanaanta ayaa la Heli karaa:
Rasaas kulul oo dhalaalaysa oo xagga dambe ah ayaa macaamiisheenna u siineysa ikhtiyaar dheeraad ah oo ah isku-filnaansho. Waxay gacan ka geysan doontaa isku-daboolidda guryuhu inay sii ahaato xitaa ka dib dabayl daran iyo duufaan inta lagu jiro dhismaha. Sidoo kale, waxay ka caawineysaa shaqaalaha inuu si fudud u rakibo.
·Caddeynta ilmada: Maaddaama ay tahay meel muhiim ah, xoogga ilmada (adkeysiga ilmada weyn xitaa marka lagu jiro rakibaadda rabshadaha) waxay u baahan tahay in lagu qiimeeyo xarumahayaga horumarsan iyo tikniyoolajiyada wax soo saarista, shaqaalaha aad u muhiim u ah.
·Biyo ma galeen: Si ka duwan sidii celcelis ahaan loo duubay, saqaf xumo ayaa sababeysa godad fara badan iyo kala fogaansho u dhexeeya cajaladaha. Shiningwrap wuxuu leeyahay tayo wanaagsan oo dhogor ah taas oo ka dhigaysa hal inji oo kasta oo dharka ka mid ah ah oo aan biyuhu ka soo bixin.
·U adkaysashada UV: Waxaan u isticmaalnay daaweynta ugu fiican UV iyo xasilinta si loo xaqiijiyo xasilinta inta lagu gudajiro soo-if-qaadista UV ama dhismaha muddada-dheer.
Hore: 3-Qalabka Ply Synthetic Roofing Coverley
Xiga: Membrane Dabka Neefsiga